Global Voices teny Malagasy » Nahoana No Novain’ i Singapaoro ny Anaran’ny Fampiratiany Vaovao Momba Ny Ady Lehibe Faharoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Marsa 2017 4:18 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Nantsoina hoe Syonan, anaran'i Singapaoro nandritra ny fibodoan'ny Japoney nanomboka ny taona 1942 hatramin'ny taona 1945, tany am-boalohany ny tranombakoky (lalantsara) ny Ady Lehiba Faharoa. CC 3.0.
Mba hanabeazana  ny tanora momba ny horohoro ateraky ny ady, indrindra fa ny traikefa mangidy niaretan'ireo Singapaoreana an'arivony nandritra ny fibodoana Japoney nanomboka tamin'ny taona 1942 ka hatramin'ny taona 1945, nanokatra fampiratiana vaovao  ny fanjakana ao Singapaoro tamin'ny 16 Febroary, izay nantsoiny tany am-boalohany hoe “Tranofitaratra Syonan: Ny Ady sy Ny Lova Navelany .”
Ny ampitson'ny andro fanokafana, na izany aza, novain'ny fanjakana hoe “Tafavoaka Velona Tamin'ny Fibodoana Japoney”: Ny Ady sy ny Lova Navelany” ny anaran'ny tranofitaratra.
Maro ny olona nampahatsiahy ny manampahefana fa ny “Syonan-To,” izay midika hoe “hazavan’ ny atsimo,” no anarana nampiasain'ny Tafika Imperialy Japoney raha nibodo an'i Singapaoro nandritra ny Ady Lehibe Faha- II izy. Maro no nahatsapa fa ny fanapahan-kevitra hamelona indray ny anarana dia fanevatevana ireo olona an'arivo nijaly nandritra ny fibodoana Japoney.
Inona no ao anatin'ny anarana? Marobe, raha hoe Tranofitaratra Syonan izany. Midika ho anaran'ny fampiratiana sa tahalan'ny tranofitaratra izany?
Nanazava  ny antony nisafidianany ny anarana Syonan ny Biraon'ny Tranom-bokim-pirenena, izay mitantana ny fampiratiana:
Ny anarana vaovaon'ny tranombakoka dia mampahatsiahy antsika ny fahalemen'ny fiandrianantsika, satria tsy ny fahafahan’ i Singapaoro ihany no very nandritra ny Fibodoana Japoney fa ny anarany ihany koa
Saingy nanontany  ny antony nanokafana ny tranombakoka tamin'ny tsingeritaona fanafihan'i Japana an'i Singapaoro ilay mpanoratra, Tan Wah Piow:
Vao mainka hafahafa ny fotoana nanokafana ny Tranombakoka Syonan tamin'ny andro nandresen'i Japana an'i Singapaoro. Mba hahafeno ny kivazivazy, afaka manasa ireo hiringiriny ao amin'ny farany ankavanana Japoney ihany koa ny governemantan'i Singapaoro mba hitarika ny fanokafana ny tranombakoka.
Nandrisika ny fanjakana mba hanitatra  ny lohahevitry ny fampiratiana Ady Lehibe Faharoa i Verrnon Cha:
Nahoana no endriky ny filavoana lefona tamin'ny Japoney no lehibe kokoa eo amin'ny fahatsiarovantsika ara-tantara fa tsy ny endriky ny filavoana lefona Japoney?
Maninona raha manasongadina ny maha zava-dehibe ny fifanekena sy ireo mpiaradia ao anatin'ny tontolo maro tendro?
Maninona raha manome voninahitra ireo mpiaradia tamintsika tamin'ny ady – anisan'izany ny komonista, ny KMT, ny Britanika, ny Aostraliana sy ny Amerikana izay niara nametraka ny loharanon-karenan'izy ireo mba hanafaka an'i Malaya sy Borneo?
Maninona raha mankatoa fa tamin'ny ady lehibe, mety ho very sy hita indray ny sisintany – ary ny «fahalavoan'i Singapaoro» dia tokony hifandanja amin'ny «fanafahana an'i Singapaoro»?
Nanoratra i P N Balji, mpanao gazety menavazana iray fa mampiseho ny tsy fahaizan'ny  fanjakana mahatakatra ny fihetsehampon'ny mponina zokiolona ao amin'ny firenena ny zava-misy:
Manipika zava-misy iray mampanahy izany: fa very fifandraisana amin'ny ampahany lehibe eo amin'ny fiarahamonina ny olona mitantana rafi-panjakana: Ny olom-pirenena zokiolona dia tahirim-batom-pifidianana tsy fantatry ny governemanta mankany amin'ny fahaverezany.
Rehefa avy nandre ireo tsikera avy amin'ny olom-pirenena marobe i i Yaacob Ibrahim, minisitry ny Fifandraisana sy ny Vaovao, dia niala tsiny  noho ny fampiasana ny anarana Syonan. Nanambara ihany koa izy fa omena anarana vaovao ny tranofitaratra:
Lavitry ny fankatoavana ny Fibodoana Japoney, ny fikasanay dia ny hampatsiahy ny zavatra nandalovan'ireo razambentsika, mahatsiaro ireo andian-taranaka Singapaoreana niaina ny Fibodoana Japoney, ary manamafy ny fahavononantsika rehetra tsy hamela izany hitranga intsony.
Tsy izany velively ny fikasanay, koa miala tsiny aho noho ny alahelo nateraky ny anarana.
Nandinika lalina mikasika izay norenesiko aho. Tsy maintsy manome voninahitra sy manaja ny fahatsapan'ireo izay nijaly mafy sy very fianakaviana nandritra ny Fibodoana Japoney isika.
Taorian'izany fanambarana izany, efa voafafa sahady ny anarana Syonan teo anoloan'ny tranombakoka:
Hampahatezitra olona vitsy ny fanovana ny anaran'ny Tranombakoka Syonan
Nanamafy  ihany koa ny praiminisitra Lee Hsien Loong fa tsy ho antsoina intsony hoe Syonan ny tranofitaratra:
Singapaoreana marobe avy amin'ny foko rehetra no niaritra ny fahabibiana mahatsiravina nandritra ny Fibodoana Japoney, na nanana fianakaviana niharan'izany.
Manome voninahitra sy manaja izany fihetseham-po lalina izany izaho sy ny mpiara miasa amiko. Ka nomenay anarana vaovao ny fampiratiana mba hiarahana mizaka izany fahatsiarovana mampalahelo izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/15/96186/
 fampiratiana vaovao: http://www.nas.gov.sg/formerfordfactory
 tsy fahaizan'ny: https://sg.news.yahoo.com/comment-sayonara-to-syonan-with-a-message%E2%80%A8-031435286.html
 niala tsiny: https://www.mci.gov.sg/pressroom/news-and-stories/pressroom/2017/2/statement-on-syonan-gallery-war-and-its-legacies?page=2